Rooble oo eryey 7 xubnood oo ka mid ah Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashada | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Rooble oo eryey 7 xubnood oo ka mid ah Guddiga Xallinta Khilaafaadka...
Muqdisho (Dalkaan.com) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa eryey 7 ka mid ah xubnaha Guddiga Xalinta Khilaafaadka doorashooyinka, wuxuuna magacaabay toddoba xubnood oo cusub.
Xog ay heshay Dalkaan.com ayaa sheegeysa in xubnaha la eryey ay ku milmeen oo ay qeyb ka noqdeen ololaha doorashada madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Arsenal oo ogolaatay inay lacag waalan kula soo wareegto xiddiga Manchester...
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis la gaartay Manchester City saxiixa Gabriel Jesus. 25-sano jirkaan ayaa mar kale si joogta ah ugu ciyaarayay...
HORDHAC DOCUMENTARY JAWAABTII DALABKIINA WAA TAN,
XAWAALAD CASRI AH OO HUFNAAN IYO HAWL-KARNIMANA KU CAAN BAXDAY....
Yaa ku guuleystay doorashadii adkeyd ee kursiga beesha Daa’uud?
Philippe Coutinho oo doortay Kooxda uu kaga biirayo Horyaalka Premier League-ga
Cabdiweli Muudeey “Waa la igu xad gudbay maanta”